Waxa la sheegay in la asaasayo bangiga horumarka ganacsiga yaryar - ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in la asaasayo bangiga horumarka ganacsiga yaryar
Waxa wargayska addis maleda u waramay wakalada shaqo abuurka magalooyinka iyo damaanada cuntada ee federaalka daraasaad ay sameeysay in la asaasi doono bangiga ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexe.
Waxa la sheegay in la asaaso bangiga horumarka ee ganacsiga yaryar iyo kuwa dhaxe daraasadka lagu sameeyay ay ka wada xaajoodeen bangiga ganacsiga ee qaran, wakalada shaqo abuurka magaalooyinka iyo damaanada cuntada ee federaalka iyo xafiisyada amaahda lacagaha iyo kaydsiga ee deeganada oo sidi bangigaasi loo asaasi laha kawada xaajooday.
Xirfadlaha dhinaca xidhiidhka dad waynaha ee wakalada mudane Behaylu Nuguse oo ka hadlay amuurtaasi ayaa sheegay in wakaaladu ay dhookmantiyada daraasadka usoo ban dhigtay bangiga ganacsiga ee qaran si u bangiga ganacsigu u daraasad ugu sameeyo in mashruucani u faaido leeyahay iyo in kale, sidoo kale wakaaladu waxa ay ka heeshay aqoonsi cida ay khusayso arintani sidaas dartedna ay bilaabeen darasaadka ku saabsan in u bangigani faaido leeyahay iyo in kale.
Waxa kale oo la sheegay in asaasida bangigan horumarinta ganacsiga yaryar iyo kuwa dhaxe arinta ugu muhiimsan ee loo rabo in la assaso ay tahay dhibaatata lacag yarida ah ee ka jirta dhinaca ganacsigaasi si xal loogu helo. Waxa la og yahay Korodhka misaaniyada dakhliga dhaqaalaha ee dalka iyo shaqo abuurk iyo yaraynta saboolnimada in u door wayn u ka ciyaaro ganacsiga yaryar iyo kuwa dhaxe ,hadana ay caqabad ku noqotay si aanay ganacsigooda sidi ay rabeen u wataan lacag yaridu.
Waxa kale oo la cadeeyay si loo balaadhiyo horumarinta ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexeba lacag yarida caqabada ku noqotay awgeed in laga baaran dagay si loo asaaso bangiga horumarinta ganacsiga yaryar iyo kuwa dhaxe.
Sida ay daraasadka ku samaysay wakaladu ayaa waxa la ogaaday in xafiisyada lacagaha yaryar soo bandhiga oon isticmaalin teknologiyada casriga ah ee bangiyada,adeega lacagaha amaahda oon soo gaadhin xiligooda, shaqada oon hour marsanayn oo musuq ku jiro,lacagaha ay ka helaan xafiisyada lacagaha oo amaahdoodu badan tahay,lacagta dulsaarka ama ribada oo aad u badan marka la barbar dhigo bangiyada kale ee dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn iyo lacagaha ay ku dhaqdhaqaaqayaan oon ku filnayn ayaa lagu soo ogaaday darasaadka la sameeyay.
Sidoo kale waxa la qorsheeyay madama ganacsiga yaryar u dhakhliga dalka faaido wayn u leeyahay in ay ka faaidaysan karaan xafiisyada dakhliga yaryar oo dhan,hayadaha horumarka,cida ay khusayso arintan horumarinta ganacsia,iyo cidi kale ee rabtaba in ay iibsadaan marka la asaasayo bangiga hurumarinta ganacsiga yaryar aksiyoonada oy noqdaan hantilayaasha bangiga.
Sidoo kale waxa lagu xusay darasaadka in la smaeeyn doono urur bangiga horumarinta ganacsiga yaryar si loo sameeyo kooxo hawlaha fyliya, kuwaasi oo kal ah koox amahda lacagaha iyo kaydka ah,kuwo damanada lacagaha yaryar,kuwo maamula lacagaha oo adeega casriga ah ee bangiga qabta sidoo kale hawlaha dhinaca dawlada wada oo fuliya sharciga horumarinta dhaqalaha ee waaxdaasi.
Ayada oo hawshan ay fulinayaan cida ay kusayso arintani ee bangiga horumarinta ee ganacsiga yaryar iyo kuwa dhaxe ayaa hadana la sheegay in ay xal u noqonayso caqabada dhinaca lacag yarida ka jirta waaxdaasi.madaama dhibaatooyinka ay la kulamaan ay kaw ka tahay lacag yaridu iyo lacagta dulsaarka ama ribada oo aad u badan ay tahay.
Sido kale daraasaadka ay samaysay wakaladu waxa ay ku sheegtay in asaasayaasha ganacsiga yaryar lacagta ay ku bilaabi doonaan mashruucaasi ay noqon doonto mid laga uruurnaayo boqolkiiba 44 kaalmo ay ka heli doonaan qooysaskooda boqolkiba 41 ay iyagu iska ururin doonaan iyo boqolkiba 16 amaah ay ku qadan doonaan.
Ugu danbayntina waxa daraasadkasi lagu xusay in xafiisyada lacagaha yaryar ay lacagaha amaahda ah xiligii loo baahna aanay u soo gaadhsin sidoo kale adeeg hufan anay ka helin ganacsatadi amaaha qadatayna aanay lacagihi ay qaateen ugu isticmaalin si faaido leh.
አዲስ ማለዳ 17 Adoolessa 2013 No 5
Total views : 7512311